Umshini wokupholisha amatshe abakhiqizi & abahlinzeki - China Umshini Wokupholisha Umshini Wamatye
Okuzenzakalelayo wokucwebezelisa Machine for Granite
Lo mshini onamazinga aphakeme emhlabeni jikelele wemishini yokugaya nokupholisha itshe le-granite, i-JOBORN yayine-R & D futhi yayiwenza ngesisekelo sezinzuzo zemikhiqizo efanayo ekhaya nakwamanye amazwe. Umklamo wemboni womshini ukuhola ukuthambekela komkhakha, Ukugaya nokupholisha ...
Okuzenzakalelayo wokucwebezelisa umshini Marble
Lo mshini onezinga eliphakeme lamazwe omhlaba lokugaya nokupholisha imishini, i-JOBORN yayine-R & D futhi yayiwenza ngesisekelo sezinzuzo zemikhiqizo efanayo ekhaya nakwamanye amazwe. Umklamo wemboni womshini wokuhola ukuthambekela komkhakha, Ukugaya nokupholisha ukusebenza kahle ...
Okuzenzakalelayo Litchi-Surface Ukugaya Machine
Lo mshini onamazinga aphakeme emhlabeni jikelele wemishini yokugaya i-litchi-surface, i-JOBORN yayine-R & D futhi yayiwenza ngesisekelo sezinzuzo zemikhiqizo efanayo ekhaya nakwamanye amazwe. Umklamo wemboni womshini wokuhola ukuthambekela komkhakha, Ukugaya ukusebenza kahle nokugaya ...
Manual wokucwebezelisa Machine
Lo mshini usebenzisa ikholomu eliyindilinga njengendawo yawo yokushelela yomhlahlandlela wokuphakamisa okuzenzakalelayo phezulu naphezulu. Lo mshini usebenza ekugayweni kwendiza nokupholishwa kwamalabhu ngobukhulu obuhlukahlukene kakhulu, amatshe amathuna, netshe elinomklamo. I-worktable ingakhethwa ukugaya ubuciko bezandla ngaphakathi ...
Stone Edge Ukugaya Machine
Isondo lokugaya lalo mshini lisebenzisa idiski yokugaya amanzi futhi ifakwe ngokuhlanganyela komnenke. Ngokuya ngosayizi ohlukile nokushuba kwetshe, umngcele ongezansi ongakwesokudla wamatshe ahlukahlukene angaba umhlabathi. Umphetho oqondile ojiyile uyakhanya, umphetho ongezansi engakwesokudla i ...